VITA NY FIFANAOVAN-TSONIA : Ho hita ao amin’ny « Star Times » ny TVM sy RNM
Afaka manaraka ny fandaharan’ny TVM sy RNM ao amin’ilay vondron’ny fahitalavitra sinoa anisan’ny matanjaka eran-tany ao amin’ny Star Time, manomboka amin’ny volana Janoary 2014, izao tontolo izao sy isika eto Madagasikara. 5 décembre 2013
Tontosa omaly ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa eo amin’ny tompon’andraikitry ny Star Times sy ny minisitry ny Serasera, Rahajason Harry Laurent.
Ankoatra ny Parabole Madagascar, Canal Sat, Blueline dia ho hita ao amin’ny Star Time indray ny Tvm sy Rnm. Fikambanana fandaharana fahitalavitra (Chaine) maromaro iraisam-pirenena ny Star Time. Andoavam-bola ny fidiran’ny fahitalavitra iray ao amin’io Star Tme io saingy noho ny fiaraha-miasa matotra eo amin’ny Firenena roa tonta dia tafiditra maimaim-poana ao anatin’izany ny fandaharan’ny TVM sy Rnm.
Manaraka azy avokoa ny ankamaroan’ny firenena maneran-tany na dia handoavam-bola tahaka ny Canal Sat sy ny Parabole Madagascar aza ny fidirana amin’io Star Time io. Tombotsoa ho an’ny Firenena Malagasy ny fahafahantsika miditra ao amin’io vondron’ny Fahitalavitra io satria afaka manaraka ny zava-misy mikasika antsika ny any ivelany any, indrindra ny mikasika ny fizahan-tany.
Hahazo tombony ihany koa izay mponina eto Madagasikara afaka manaraka ny fandaharana vokarin’ny Star time satria dia afaka manaraka ny zava-misy any ivelany ihany koa izy ireo. Fandaharana maro avy amin’ny fahitalavitra malaza any Sina sy firenena maro hafa no hita ao. Afaka manaraka vaovao ara-panatanjahantena isan-karazany avy amin’ny Firenena maneran-tany indrindra ny League de champion sy ny Fifa World Cup. Marihina fa fiaraha-miasa teo amin’ny minisitry ny Serasera, Rahajason Harry Laurent sy ny Tompon’andraikitra ny Star time no ahafahantsika manaraka ny Champion’s League maimaim-poana ao amin’ny TVM, izay nanomboka tamin’ny 8 oktobra ka hatramin’ny volana Mey 2014.